Riyadii Itoobiya oo rumowday iyo Xuseen Ceydiid oo afkiisa ka qirtay
Waxaan qoslay markii aan maqlay ra'iisal wasaare ku sheega wakiilka Sinaawi ee Soomaaliya Xuseen Ceydiid la soo shirtagay in jamhuuriyada xorta ah ee Soomaaliyeed lugu darro Itoobiya si ay ula midowdo iyagoo yeelanaya waxa uu ku sheegay hal baasaboor iyo hal ciidan. Talow ninkan ma riyoonaya mise waxbaa ka si ah? Jawaabtu " waxbaa ka si ah" waxaana uu ilowsan yahay in hadalkaasi dhalanteedka ah uu yahay mid caqliga diidayo taasina hadey iman kartana aysan ciidankii xooga Soomaaliyeed dagaal ku qaadeen cadowgaasi soo jireenka ah si loo soo celiyo dhulkii ay naga qaateen waaba maanta halugu darro dhulalkii kale ee xorta ahaa. Alla muxuu qarar jafayaa ninkaasi iyo dowlad faashilka ah ee Helekobterada lugu keenay ee ku mid yahay.
Xuseen Ceydiid oo ay muuqato aqoon darrada u leeyahay Yurub iyo axdiga u yaala wada shaqeyntooda ayaa tusaale u soo qaatay dalalka horamaray laakinse waxa uu ilaaway inuu yahay ninka keliya ee calooshii u shaqeyste ka ah Soomaaliya dhawaana shabakad lugu soo daabacay calooshood u shaqeystayaalka aduunka uu dhanka Soomaaliya ka dhex muuqday. Waa yaab ninkaas baa doonaya inuu ka taliyo masiirka ummadda! Alla muxuu calanku ayaan darran yahay kaas iyo misaalkiis baa sheeganaya.
Hadaba iyadoo ka Ikraam ahaan aan ogsoonahay in sirta uu daboolka ka qaaday calooshii u shaqeystahaasi aaney soconeyn ayaa hadana mudan in la isweydiiyo waxa qariiradii dhawaan ay daboolka ka qaadeen xilidhibaanadii ka soo cararay Beydhabo ee shaaca ka qaaday in Qarankii Soomaaliya halis ku jirto kadib markii qariiradaasi laga tiray magacii Soomaaliya ay daliil u tahay hamiga Itoobiya ee ku aadan dhulkeena iyo waxa kulmiyey hadalka ninkan aan xishoodka aqoon ee ku sheegayo la midowga cadowga soo jireenka ah....
Shacabka maxaa la gudboon haddii warkaasi sax noqdo?
Ummadda Soomaaliyeed hadey dooneyso iney lamidowdo Itoobiya dagaal lama gasheen geesigii Axmed Gureyna dagaal kuma qaadeen ee maxaa ka qaldan dowladan daba dhilifka ah? Shacaka Soomaaliyeed miyaase yeelaya dayaacada raqiiska ah ee ina Ceydiid iyo dowlada faashilka ee Geedi? Ummadda Soomaaliyeed waxaa la gudbiin iney ka dhii dhiyaan shaqsiyaadka ku hadla afka soomaaliga ee Geedi, ina Yeey, Jeelle iyo Xuseen Ceydiid arrinta ay wadaan kuwaasoo dhamaantood u soo qalab qaatay iney burburiyaan Qaranka Soomaaliyeed.
Arrintani waa mid ahmiyad leh una baahan in la dhuuxo si qoto dheerna looga fekero siddii loo bad baadin lahaa Qaranka halista ku jira maxaa yeelay maanta ayaan la yiri Soomaaliya hna noqoto Itoobiya, taasoo ah mid aan weligeed dhici doonin insha Allaah. Muwaadinka Soomaaliya ee u dhashay dhulka iyo calanka Soomaaliyeed waxaa waajib ku ah iney hubka markale qaadaan si ay riyadii Minilik ay u beeniyaan taasoo ay maanta cadahay iney run ka dhigayaan shaqsiyaad calanka hoostiisa caano lugu siiyey kuna hana qaaday magaca aan dhumi doonin ee daa'in abid jiraya ee Soomaaliyeed.
Ciidanka xooga dalka ee qaarkood ku naafoobay iyo kuwa maanta nool waxaan leeyahay markale qibradiinii caskari soo bixiya si loo difaaca jiraankeena ummadeed ee faashiliinta Beydhabo lugu quudiyo doonayaan taaso ah rumeyntii riyadii cadowga soo jireenka ah. Hana ilaawina waxaad qaarkiin ku weyseen xubnaha jirkiina soo celinta dhulalka maqan maantana waan hubaa in damiirkiina iyo keenaba ee taageerada idiin haya ineysan yeeleyn dacaayada raqiiska ah ee ina Ceydiid meelaha ka sheeg sheegayo taasoo iyadana ah mid taariikhda gashay oo ku jiri doonta quluubteena iyo jiilka dambe.
Itoobiya markey dagaalka aan xishoodka laheyn ku soo qaaday qarankeena waxey ilowday iney la dagaashay kooxo yar oo jabhad aan waxba dhaamin iyadoo kula dirrirtay caqiiqda ay aamisan yihiin ee soomaaliyeed iyo diineed. Itoobiya ma ahan mid haweysan karta dowlad soomaaliyeed oo awood leh taariikhdana ma sheegin iney arrinkaasi sameysay sidaasi daraadeed Itoobiya waxeedu waa "habar fadhida legdin la fududaa" In aan qaran soomaaliyeed badbaadiis u imana waa mida ay maanta u adeegsatay kooxaha canaasirta ah ee kufaarta u adeega sida ina Ceydiid, Jeelle, ina Yeeyo iyo Geedi.
Ugu dambeyntii ummad yahay waxaa la joogaa waqtiigii aan iska dhicin laheyn cadowga soo jireenka ah marna yeynaan yeelin dibindaabyada shaqsiyaadka pro Itoobiyaanka ee fulinaya danaha guracan ee lugu doonayo in Qaranka Soomaaliyeed gacanta loo geliyo cadowga soo jireenka ah. Xuseen Ceydiid (calooshood u shaqeystaha ) aqoona uma laha qaabka Yurub ay xuduudaha u wadaagta iyo ineysan wada wadaagin baasaboor uu sheegayo waxaana qurux badan inuu ka fiirsado kaafirkasi ina Ceydiid waxa uu ku hadlayo ka hor intaa aaney xaajo faraha ka bixin.
Soomaaliya soomaali baa leh, calankana kor buu ahaanaya inta uu jiro ruux damiir leh oo ka damqanaya waxa ay wadaan faashiliinta Beydhabo lugu naas nuujiyo!! Calanka iyo ciida soomaaliyeed weligood soomaali baa lahaaneysa No Itobiya!
Sawirka Amin Camir ogolaanshihiisa ayaa lagu daabacay